wararka maanta-arlaadii.net » Madaxweyne Shariif Xasan Oo La Kulmay Ciyaartooyda Kubada Cagta Ee KGS (Sawiro)
Madaxweyne Shariif Xasan Oo La Kulmay Ciyaartooyda Kubada Cagta Ee KGS (Sawiro)
Madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya ayaa maanta kulan dhiirigelin ah u sameeyey ciyaartooyda KGS oo dhowaan ka qeyb gelidoona tartanka dowlad goboleedyada dalka oo maalinta sabtida ah ka furmi doona garoonka istadio banaadir ee magaalada muqdisho.
Kulankan ayaa waxaa ka soo qeyb galay Xildhibaano, wasiiro, siyaasiyiin, fanaaniin, iyo xubno kasocday bulshada rayidka, kuwaas oo dhamaantoodaba isku raacay in si wadajir ah juhdi loo geliyo ciyaartooda koonfur galbeed sandkan wajahaya ciyaar aad u adag.
Ugu horey waxaa kulanka ka hadlay agaasimaha fanaka iyo suugaanta KGS C/raxmaan yuusuf cabdi all.cadaala, waxa uuna sheegay in ay heeso dhiirgelin ah ugu tala galeen kooxda KGS isagoona dhanka kale sheegay in ay uga dhigan tahay in ay guul kooxda KGS ay gaareen.
Wasiirka wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyarada KGS cabdulaahi fanax ayaa qirey in todobaadkan haddii uu alle idmo ay soo hooyin doonaan guulo wax ku ool ah, wasiirka ayaa tusaale usoo qaatay in ay kasoo shaqeynayeen mduo 8 bilood ah sidii meesha maanta lajoogo ay usoo gaari lahaayeen kooxda kubada cagta koonfur galbeed soomaaliya.
Xildhibaan idiris cabdi dhaqtar oo kamid ah xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayaa cod dheer ku sheegay in uu diyaar u yahay in uu siin doono ciyaar yahankii dhaliya goolka koowaad ee ciyaarta ay la cayaari doonaan xulka kubada cagta ee HIRSHABELE xildhibaanka ayaa isagoona sidoo kale ugu baaqay saaxiibada kale ee siyaasiyiinta reer koonfur galbeed in ay qaataan go’aankaas uu isaga qaatay mid lamid ah maadaama ay dhiirigelinta ay tahay mid wanaagsan.
Wasiirka wasaaradda tamarta iyo biyaha dowladda soomaaliya Mudane Saalim Caliyow Ibrow ayaa waxa uu isagana goobta ka sheegay in uu bixindoono lacagta labaad ee lagu dhiiri gelinayo ciyaar yahanada koonfur galbeed soomaaliya, lacagtaas oo lagu sheegay 1,000 doolar.
Madaxweynaha koonfurgalbeed soomaaliya Mudane shariif xasan sheikh aadan ayaa mid mid u gacan qaaday ciyaartooyda madaxweynaha ayaa sidookale sheegay in arrintan ay muujineyso isku duubni iyo rajo lagaga miri dhalinkaro ciyaarta sabtiga ay dheeli doonaan kooxda Kubada cagta KGS.
daawo sawirada kulanka
Dawlada oo sheegtay in ay la dagaalameeso Musuqmaasuqa
Diyaarado Duqeymo ka geystay Sh.hoose